Ipakethe yeMega yezixhobo zeAdobe Photoshop Simahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UFran Marin | | Photoshop, Izibonelelo
Ngaba uyafuna ukuvuselela ikhathalogu yakho yezixhobo kwiFotohop? Siza kwenza ukuba kube lula kuwe, namhlanje sikuphathela iipakethe zezipho ezahluka-hlukeneyo zeAdobe Photoshop. Uyilo ngalunye lufuna izixhobo ezithile kwaye isindululo ngasinye sifuna uhlobo lwezixhobo. Kwipakethi elandelayo uya kufumana kuyo Iigradients, ii-swatches, iifonti, uburhabaxa, iipateni, kunye nezimbo kunye neebrashi. Imiyalelo yokuyifaka ilula kakhulu:
Okokuqala kufuneka khuphela ipakethe yethu kwifomathi ye .rar ukusuka eqongeni Google Drive ukuyikhupha kamva kwaye ufake icandelo ngalinye. Nje ukuba sikwenze oku, ukufakela kuya kuba lula kakhulu:
Imithombo engama-50: Ukuzifaka kufuneka sikope iifayile ezingaphakathi kwifonti kwifolda kule ndlela ilandelayo: Qala> Iphaneli yokulawula> Iifonti (KwiWindows). Njengoko uyazi, ezi fonti ziya kubonakala kuzo zonke iinkqubo ezisebenzisa isixhobo sokubhaliweyo.
Iipakethe ezingama-59 zeebrashi: Itheyibrashi ithebhu> Khetha (isimboli segiye)> Umphathi osetiweyo> Layisha iibrashi. Siza kukhetha indawo apho sizivule khona iibrashi kwaye sizikhethe. Ipakethi nganye iqulethe iibrashi ezininzi kwaye kufuneka ulayishe nganye nganye.
I-1 Swatch Pack: Umphathi we-Preset> Swatches> Layisha. Siza kukhangela indawo apho siyikhuphile khona ipakethi yethu kwaye siya kuyikhetha kunjalo. Iisampulu ziyafumaneka ukuze zenze iithonjana umzekelo.
Iipakethe zeGradient: UMphathi we-Preset> Swatches> Layisha. Siza kulandela inkqubo efanayo nale siyilandeleyo nezinye izixhobo zethu.
Iipakethe zohlobo lwe-10: Ukuseta kwangaphambili umphathi> Izimbo> Umthwalo. Izitayile zihlala ziluncedo ekusebenzeni kwifomathi yokubhaliweyo, ucwangciso, ukuthumela imiyalezo ...
Ipakethe yePateni eyi-1: Umphathi osetwe kwangaphambili>. Iimpawu zihlala zibizwa ngokuba ziPateni kwaye ziyimifanekiso ephindaphindwe ngokungenammiselo kumphezulu esifuna ukuwenza.
1 Iphekhi yokwenza: Siza kufaka le pakethi kwicandelo lezizathu kwaye siya kulandela inkqubo efanayo nale siyilandeleyo xa sifaka izizathu zethu.
Ngaba uyafuna ukufumana Iifilitha ze Photoshop? Kwikhonkco esishiye nje ungazifumana.
Sukuba nexhala, asilibalanga ikhonkco lokukhuphela kunye nayo yonke ipakethe ye izixhobo zeFotohop sikuxelele malunga. Ungayikhuphela simahla kwikhonkco elilandelayo: Ipakethe yeMega yeAdobe Photoshop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Ipakethe yeMega yezixhobo zeAdobe Photoshop yasimahla
UDavid londono sitsho
Phendula kuDavid Londono
Molo David, ndikhangele nje ikhonkco kwaye iyafumaneka kum :) Zama kwakhona, kwiqhosha elithi "khuphela" ngaphantsi komyalezo othi "Ukujonga kwangaphambili akufumaneki"
Molo, sele ndikhuphele zonke iipakethi kwaye zilunge kakhulu :). Amathandabuzo kulapho ifolda yeAdobe Photoshop CS6 iyakuhamba khona, kuba ukuba ndiyazicima ziyakulahleka.
Imiqulu iya nakweyiphi na incwadi eneenkcukacha, ungene nje kwifotoshop kwaye ukhethe isixhobo oza kusifaka, umzekelo, iibrashi, uyikhethe kwaye unike izixhobo ezikwikona yetafile yebrashi, unika uMthwalo kwaye ujonge yeeBrushes ezikhutshelweyo
UEduardo Bornemann sitsho
Ukuba iyafumaneka, sendiyijongile kwaye ipakethi ilungile kakhulu, enkosi nemibuliso!
Phendula uEduardo Bornemann
ipakethe entle kakhulu enkosi
Igalelo elihle: Ndiyabulela kakhulu
Enkosi kuwe ngokufunda iAlly, imibuliso;)
enkosi uncedo olukhulu kakhulu
Enkosi kakhulu, umkhulu!
Phendula Phendula Malaga512
Enkosi ngengcaciso yakho. Ndiyakonwabela :)
Enkosi ngepakethi… umbuzo nje, ezi zixhobo zinokufakwa kwinkqubo yeMac ??
ULucy Rojas sitsho
Kulungile kakhulu enkosi kakhulu
Phendula uLucy Rojas
Enkosi ngokudlula apha!
UFrancisco Arcia sitsho
Enkosi kakhulu, ukhuphelo
Phendula uFrancisco Arcia
Igalelo elihle kakhulu mzalwana..Enkosi, ndijonge phambili kwigalelo ezininzi !!!!
UFernando Ramirez sitsho
Enkosi kakhulu, ndiyazikhuphela ngaphandle kwengxaki. Nokuba uzisebenzisa zonke okanye awusebenzisi, uhlala ubulela abantu abafana nawe abathatha ixesha kunye nesisa ukulayisha ezi ntlobo zezixhobo ukuxhasa abasebenzisi ngokubanzi. Imvakalelo emnandi!!
Phendula uFernando Ramirez
Mzalwana, enkosi isigidi ngale galelo likhulu kangaka, intsikelelo kaThixo kuwe nakuni
UNicolas Cadavico sitsho
Ndiyabulela kakhulu!! Ikhutshelwe kwaye ivavanywe!
Phendula uNicolas Cadavico
Kuhleli ukubeka izingqinisiso zebhayiloji, igalelo elifanelekileyo!
Uyilo lweemvakalelo: Ubugcisa, iPsychology kunye ne-Innovation
Ifotoshop Tutorial: Amatye okubhala Icandelo II